Jonga umfanekiso ovela kuGoogleEarth -Geofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Georeferencing umfanekiso weGoogleEarth
cadastreGoogle umhlaba / imephuMicrostation-Bentley
Ndathetha ngaphambili layisha i-orthophoto kwiGoogle Earth ukuba sisazi i-georeference yayo.
Ngoku sizame ngapha nangapha, ukuba sinombono weGoogleEarth, njani ukuyikhuphela kunye nokwenza izinto.
Into yokuqala, ukuba siyazi into elungileyo kwaye kutheni kungekho iGoogle Earth, ngaphambili esele sithethe ngalo. Ewe, into yokuqala kukuba nembono iboniswe, kwaye into esiyifunayo kukukhuphela loo mfanekiso kunye nokujonga ngokwawo. Kuya kufuneka sisebenze ukhetho lomhlaba ukuze umboniso ophindwe kathathu ungonakalisi umbono wethu, kufuneka siqiniseke ukuba ikhampasi isemantla kunye nembono ethe nkqo.
1. Ukumakisha indawo yomdla
Kuya kufuneka wenze ibhokisi ngesixhobo seGoogle Earth polygon, kwiimbombo zone zesithuba ofuna ukusisika. Emva koko usondele ngokwaneleyo ukuze ufumane ulungelelwaniso lwe-UTM, ubeke isalathiso ngaphezulu kwekona, gcinani engqondweni ukuba ukuchaneka kweGoogleEarth kukujikeleze iimitha ezimashumi mathathu ukuze ungazikhathazi ngeziphelo.
Ngoku siza kunqumla ibhokisi, simele sishiye kude ukuze iitekisi kunye nekhampasi zingekho ngaphakathi kwebhokisi kwaye senza i-printscreen ngekhibhodi uze uyikopishe ukuyipenda.
Kule nqanaba kunokwenzeka ukuba usike ipeyinti, kuba ukuyenza ngokuchanekileyo kukuchitha ixesha phakathi kokuba umgca obomvu ungaphakathi okanye ngaphandle. Ndinyanzelisa ukuba, intolongo kaGoogleEarth ayifanelekanga ukuba ilwe iimitha ezimbalwa. Ngoku siyayivula ngoMphathi weMifanekiso yeOfisi (iza ne Windws) ukusika imiphetho ngokunqabileyo ngokhetho lwesityalo kunye nokurhuqa iziphelo, ndiyenza apha kuba ndifuna ukuphucula umahluko kumfanekiso kancinci.
Lo ngumfanekiso obangelwayo kunye nokutshintshwa kokukhanya.
2. Ukungenisa ibhokisi kwi-Microstation
Ngoku siza kuyisebenzisa ngokubaluleka kweMicrostation V8, sikopa idatha yolungelelwaniso ngokugqwesileyo ngokulandelelana x, y, z kwaye siyigcine kwifomathi ye-.txt yokusebenzisa zero. Oku kwenzelwa ukuba ungangeni amanqaku ngeenyawo kunye nesitshixo.
Ngoku kwiMicrostation, ukuba idatha ye-xyz yokungenisa idatha ayisebenzi, siyenza ngezixhobo / iibhokisi zeethuluzi kwaye siyikhethe ekugqibeleni. Ngesi sixhobo singenisa amanqaku ukusuka kwifayile egqwesileyo kunye ne-voila, esele sinayo kwisiseko sokwelula umfanekiso.
Ukwenza ukuba amaphuzu avele ngakumbi, ungatshintsha umbala kunye nobukhulu bendawo.
3. Ukufakela i-Georeferencing umfanekiso kwi-Microstation
Ngoku konke okuseleyo kukungenisa umfanekiso, kuba sisebenzisa umyalelo womphathi we-raster, kunye nenketho "yendawo edibeneyo" kwaye uyibeke ngaphakathi kwamanqaku amane.
Ukuyolulela, sisebenzisa umyalelo we-warp, kunye nenketho yezinto ezine, kwaye ubonise nganye ikona yomfanekiso ngokumakisha amanqaku apho ihambelana nayo.
Xa siwabonakalisile amanqaku amane sicofa ekunene kwiscreen kwaye kunjalo. Imifanekiso eqingqiweyo kaGoogle. Ngoku ukusuka apha ungagcina lo mfanekiso ngayo nayiphi na ifomathi eboniswe ngomhlaba.
4. Ukuchithwa ngokubaluleka kwalo 🙂
Ndiya kugxininisa ngcebiso engokugqibela, le nkqubo ende ndiyichazile ukuba ndichithe ixesha elincinane lelo hambo ebendikhathele. Ungayisebenzisi le mi sebenzi emininzi, ngokuba idatha yeGoogleEarth ayisebenzi kuyo. Ukukubonisa umzekelo, ndibeka ngaphezulu imephu ye-cadastre kuyo.
Ukuhlaziywa, ukukhuphela iifoto ngendlela engaphantsi kunokwenziwa ngokuxhuma ngqo inkqubo ezininzi okanye kunye Umtsalane wezithombe zeGoogle Maps
Nguwe kuphela owaziyo amaphuzu.
cima c. zepeda uthi:
Ndixelele ukuba ukuba i-georeference kwi-google imifanekiso yenziwa ngokufanayo kunye ne-georeference iphepha le-cartographic okanye i-UTM kwiindawo ezincinci ngenxa yokuba ndininzi kwaye andinakukwazi ukulungelelanisa iindawo ze-GPS kuzo. Yintoni endiyayenzayo? Ndiyabulela i-GEO yonke into. IZISEBENZI
roberto galeano vanegas uthi:
Iingxelo zakho zihlala zilungile, ndifuna ukuba undincede, ndinayo i-microstation kwaye andinakukwazi ukubhalisa. Ndicinga ukuba isofthiwe inenkinga. Ukuba unomusa kakhulu ukundithumela le software, ndiyakuyixabisa. isipho sokufundisa sibone ngokukhawuleza
ngukuthi umntu unokundixelela njengemeko ye-georeferencio umfanekiso wegoogle kodwa kwi-Idrisi Andes.
Sawubona Denis, yeyiphi ifomathi yefayile othetha ngayo?
Denis Vasquez uthi:
indlela yokulayisha i-orthophoto nge-Microstation v8 xa ndilayisha enye indixelela ukuba ifayile ayihambisani nayo eya kwenzeka?
isixhobo sokwenza iipolgoni ziza kwi-google yomhlaba jikelele, kuluhlu oluphezulu.
Ukuba ayibonakali, yenza ukuba isebenze usebenzisa "imboniselo / ibar yeSixhobo" kwaye liqhosha lesithathu
Ndinombuzo malunga nenyathelo loku-1, andikwazi ukubonisa ipoligoni ukumakisha ibhokisi…. Ngaba usebenzisa uguqulelo lwe-GE Pro okanye uguqulelo oluqhelekileyo?
Ngombulelo ngokuphendula kwakho ngokukhawuleza,